Mmebi na-ekwu: gịnị ka ịchọrọ ịma? | Law & More B.V.
blog » Mmebi na-ekwu: gịnị ka ịchọrọ ịma?
Mmebi na-ekwu: gịnị ka ịchọrọ ịma?
Applieskpụrụ dị mkpa dị na iwu nkwụghachi azụ nke Dutch: onye ọ bụla na-ebu mmebi nke ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nweghị onye nwere ike ịkwụ ụgwọ. Dị ka ihe atụ, chee banyere mbibi n'ihi akụ́ mmiri ígwé. Ọ bụ mmadụ mebiri gị? N'okwu ahụ, enwere ike ịkwụghachi mmebi ahụ ma ọ bụrụ na enwere ihe kpatara iji jide onye ahụ. Enwere ike iche ụkpụrụ abụọ na iwu Dutch: nkwekọrịta na ụgwọ iwu.
Ndi otu ha abanye na nkwekorita? Yabụ ọ bụghị naanị ebumnuche, kamakwa ọ bụ ụgwọ ọrụ na nkwekọrịta ndị a na-eme n'ime ya ga-emezurịrị n'etiti ndị ọzọ. Ọ bụrụ na otu emezughi ọrụ ya n'okpuru nkwekọrịta ahụ, enwere -abia nso. Dị ka ihe atụ, lee ọnọdụ ebe onye na-ebunye ha ebunyeghi ngwongwo ya, nyefee ya mbubreyo ma ọ bụ nọrọ n'ọnọdụ adịghị mma.
Agbanyeghị, naanị ihe emezighi emezighi gị ụgwọ. Nke a chọkwara aza ajụjụ. A na-achịkwa ịza ajụjụ na Nkeji edemede 6:75 nke Dutch Civil Code. Nke a kwuru na agaghị enwe ike ịnwe onye ọzọ mejọọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi mmejọ ya, ma ọ bụ n'ihi akaụntụ, n'iwu iwu ma ọ bụ echiche na-agbasaghị. Nke a metụtakwara n'ọnọdụ nrụgide mmanye.
Onwere ihe adighi nma ma odi kwa ihe adighi? N'okwu ahụ, enweghị ike ikwu na mmebi ahụ butere n'aka ndị ọzọ. Oge ụfọdụ, a ga-ebu ụzọ zipu ọkwa ndabara iji nye onye nke ọzọ ohere iji mezuo ọrụ ya dị ka ọ dịkwa n'ime oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na onye nke ọzọ anaghị emezue ọrụ ya, nke a ga-ebute ndabara ma kwụọkwa ụgwọ.
Na mgbakwunye, iwu nke ndị ọzọ agaghị anabata nke ọma, n'ihi ụkpụrụ nke nnwere onwe nke nkwekọrịta. E kwuwerị, ndị otu na Netherlands nwere nnwere onwe nkwekọrịta dị ukwuu. Nke a putara na ndi nkwekorita ha nwere onwe ha wepu ego na adighi anya. A na-eme nke a na nkwekọrịta n'onwe ya ma ọ bụ na usoro iwu na ọnọdụ ekwuputara na ọ bara uru site na ihe Nkwupụta mgbapụta. Agbanyeghị ụdị okwu a ga-emerịrị ụfọdụ ọnọdụ tupu ndị otu nwere ike ịkpọọ ya ka ewere ya dịịrị. Mgbe okwu dị otú a dị na mmekọrịta nkwekọrịta ma mezuo ọnọdụ ahụ, isi mmalite amalite.
Otu n'ime ụdị ndị ama ama ama na nsogbu nkịtị bụ mmekpa arụ. Nke a na-agụnye omume ma ọ bụ iwepu ihe na-emebi iwu na-emebi iwu onye ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ onye bịara ileta gị nwere ike kpachara anya kpuchie ihe ịchọ mma gị ma ọ bụ dobe igwefoto foto dị oke ọnụ. N'okwu ahụ, Ngalaba 6: 162 nke Dutch Civil Code kwupụtara na onye e mere ụdị omume ma ọ bụ nleghara anya ndị a nwere ikike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na emezuru ụfọdụ ọnọdụ.
Iji maa atụ, omume ma ọ bụ omume onye ọzọ ga-ebu ụzọ were dị ka iwu akwadoghị. Nke a bụ ikpe ma ọ bụrụ na ihe omume ahụ gụnyere ịda iwu nke ikike ụfọdụ ma ọ bụ omume ma ọ bụ imebi iwu megidere iwu ma ọ bụ ọhaneze, ma ọ bụ ụkpụrụ edeghị ede. Ọzọkwa, omume ahụ ga-adịrịrị ekewetde onye 'emee ihe'. Nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi mmejọ ya ma ọ bụ ihe kpatara ya n'iwu ma ọ bụ na okporo ụzọ. Achọghị ihe nzuzo iji dabere na ngosipụta. Obere ụgwọ nwere ike zuru ezu.
Agbanyeghị, nnabata nke ụkpụrụ ọkọlọtọ anaghị ebute onye ọ bụla mmerụ ahụ n'ihi ya. Ka emechara, ibu nwere ike ka amachi site na chọrọ nke mmekọ. Iwu a na-ekwu na enweghị ọrụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ụkpụrụ a kpụrụ agbadoghị maka ichebe mmebi nke onye ọ bụla mebiri. Ọ dị mkpa na 'onye mere ihe ahụ mehiere' onye e mesoro ya n'ihi ịda iwu ahụ.
Damagedị mmebi nke ruru eru maka ịkwụ ụgwọ
Ọ bụrụ na achọrọ ihe achọrọ ma ọ bụ nkwekọrịta obodo, a ga-ekwupụta nkwụghachi ụgwọ. Mmebi nke ruru eru ịkwụ ụgwọ na Netherlands sokwa mfu ego na mfu ozo. Ebe ọnwụ ego dị na Nkeji edemede 6:96 nke Dutch Civil Code metụtara ọnwụ ma ọ bụ mfu nke uru tara ahụhụ, nsogbu ndị ọzọ metụtara dị ka edemede 6: 101 nke Dutch Civil Code na-enweghị atụ na-ata ahụhụ. Na ụkpụrụ, mmebi ihe onwunwe bụ mgbe niile na n'ụzọ zuru ezu ruo eruo maka akwụ ụgwọ, ndị ọzọ mwepu naanị insofar dị ka iwu na-enye na ọtụtụ okwu.
Nkwụghachi ụgwọ zuru oke maka ihe mebiri n'ezie
Ọ bụrụ na ọ ga-akwụ ụgwọ, ụkpụrụ bụ isi nke nkwụghachi ụgwọ zuru oke nke ihe ndị mebiri n'ezie na-emetụta.
Kpụrụ a pụtara na a gaghị akwụghachi onye mebiri emebi nke ihe mmebi mmebi ihe karịa mbibi ya zuru oke. Ederede 6: 100 nke Dutch Civil Code na-ekwu na ọ bụrụ na otu ihe ememme ahụ abụghị naanị na-akpata mmekpa ahụ metụtara, mana ọ na-ewetakwa ụfọdụ uru, a ga-enyerịrị uru a mgbe ị na-ekpebi mmebi ahụ iji kwụọ ụgwọ, ma ọ bụrụhaala na nke a bụ ihe ezi uche dị na ya. Enwere ike ịkọwa uru dị ka mmelite na ọnọdụ (akụ) nke onye ahụ metụtara n'ihi ihe omume na-emebi.
Ọzọkwa, a gaghị akwụ ụgwọ mmebi ahụ n'ụzọ zuru oke mgbe niile. Omume ezighi ezi nke onye a tara ahụhụ n'onwe ya ma ọ bụ ọnọdụ ndị dị n'ihe ize ndụ nke onye ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na nke a. Ajụjụ a na-aghaghị ịjụzi bụ ihe ndị a: ọ ga-abụ na onye ihe a mere mere ihe dị iche na nke o mere gbasara mbibi ma ọ bụ oke mbibi ahụ? Mgbe ụfọdụ, o nwere ike bụrụ na onye ahụ tara ihe a chọrọ ka o mebie ihe o mebiri. Nke a gụnyere ọnọdụ nke ịnwe ọkụ ọkụ tupu ihe mmebi emebi, dị ka ọkụ, mere. There nwere nsogbu dị n'ebe onye ahụ a tara nọ? N'okwu ahụ, omume culpable omume na ụkpụrụ na-eduga na mbelata ọrụ nkwụghachi ụgwọ nke onye ahụ kpatara mmebi ahụ na ihe ahụ mebiri ga-agharịrị n'etiti onye ahụ mebiri ihe na onye ahụ mebiri. N'aka ozo: akụkụ buru ibu nke mbibi ahụ na-akwụ ụgwọ ihe onye ahụ metụtara. O gwụla ma onye ahụ ọ metụtara metụtara mkpuchi maka ya.
Amụma mkpuchi megide mbibi
N'iburu n'uche ihe ndị a dị n'elu, ọ ga-abụ ihe amamihe ịnwe mkpuchi mkpuchi iji zere ịbụ onye hapụrụ ya na mmebi ahụ dị ka onye a tara ahụhụ ma ọ bụ kpatara mmebi. E kwuwerị, mebie ma kwuo na ọ bụ ozizi siri ike. Na mgbakwunye, ụbọchị taa ị nwere ike iwere ụlọ ọrụ mkpuchi dị iche iche ngwa ngwa mkpuchi dị iche iche, dịka mkpuchi mkpuchi, ụlọ ma ọ bụ mkpuchi ụgbọ ala.
Dealing na-emeso mmebi ahụ ma ịchọrọ ka mkpuchi ahụ kwụọ ụgwọ maka mmebi gị? Ga-akọwara onye mebiri ụlọ ọrụ gị ihe ọ bụla, ọ na - abụkarị otu ọnwa. Ọ dị mma ikpokọta ọtụtụ ihe akaebe maka nke a. Kedu akaebe ịchọrọ dabere na ụdị mmebi yana nkwekọrịta gị na onye na-eweta mkpuchi gị. Report kwusịrị mkpesa gị, onye amụma mkpuchi ga - egosi ma aga - akwụ ụgwọ mmezi ahụ.
Biko mara na ọ bụrụ na ụgwọ mkpuchi gị akwụghachila mmebi ahụ, ịnweghị ike ikwupụta mbibi a sitere n'aka onye na-emebi ihe ahụ. Nke a dị iche n'ihe metụtara mmebi nke mkpuchi mkpuchi gị anaghị ekpuchi. Mmụba nke adịchaghị na mgbakwunye na ị na-ekwu na mbibi sitere na gị mkpuchi gị bụ onye tozuru oke maka ụgwọ site n'aka onye ahụ mebiri.
At Law & More anyị ghọtara na mmebi ọ bụla nwere ike ịnweta nsonaazụ dị ukwuu maka gị. You na-emezi mmebi ma ịchọrọ ịma ma ọ bụ otu ị ga - esi nweta mbibi a? You na-emeso okwu maka mmebi ma ị ga-achọ enyemaka nke iwu na usoro ahụ? You nwere mmasị n’ihe ọzọ anyị nwere ike imere gị? Biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị bụ ndị ọkachamara na mpaghara nke nkwupụta mmebi ma nwee obi ụtọ inyere gị aka site na ụzọ na ndụmọdụ onwe gị na ntinye anya!
Previous Post Ọnọdụ na njikọ nke njikọta ezinụlọ
Next Post Mwepu